Kulankii Shalay: Hirdankii labada dhinac, Qaboojintii Dhex-dhexaadiyeyaasha & Qodob layska Riixay | Ogaalnews	CIMILLADA HARGEYSA
Kulankii Shalay: Hirdankii labada dhinac, Qaboojintii Dhex-dhexaadiyeyaasha & Qodob layska Riixay
TweetHargeysa, 21 June, 2012 (Ogaal)- Degaanka Kent ee duleedka London, ayaa shalay gelinkii dambe waxa ka bilaabmay kulan ay isku soo hor-fadhiisteen Somaliland iyo Somalia.
Kulankan oo ka dhacayay qasri uu ku nasto Wasiirka Arrimaha Debedda ee Ingiriiska William Hague iyo weliba Raysal-wasaare ku-xigeenka dawladda Wadaagga ah ee dalkaas, ayaa la sheegay in albaabadu u xidhnaayeen wufuudda labada dhinac ka socday, iyada oo taasna lagu sababeeyay in mawqifyada kala fog ee la kala aaminsan yahay awgeed laga ilaaliyo warbaahinta dunida hadiiba labada dhinac uu hadalku ka tag-taagmo.
Dhanka kale, wararka laga helayo magaalada London, ayaa sheegaya in shirkaasi ku bilaabmay jewi xaraaradiisu sarayso oo ka dhashay qoddobka ugu xasaasisan ee siyaasadda, kaasoo kiciyay jewigii shirka, isla markaana labada dhinacba uu hadalku ka taag-taagmay. Hase yeeshee, siday wararku sheegayaan murankaa dheer ka dib waxa la gaadhay waqti kooban oo nasasho ahayd. Dabadeedna intii hoolka shirka banaanka lagaga maqnaa ayay dhexdhexaadiyeyaashu labada dhinac la kala yeesheen shirar-doceedyo lagu dejinayay jewigii uu shirku ku socday.
Wararku waxay sheegayaan in markii nasashada laga soo noqday gees laysaga riixay qoddobkii muranka dhaliyay, isla markaana kulankaas intiisii dambe waxa la sheegay in lagaga wadahadlay arrimaha iskaashiga, nabadgelyada iyo hantida guud ee ka dhaxayn jirtay labada qaran. Siday wararku tibaaxeen, qoddobaddaas lagaga wadahadlay fadhigii dambe laftooda dood adag baa dhex-martay, balse wararku may sheegin wax layskaga af-gartay ama laysla meel-dhigay. Shirkan oo aad looga fogeeyay indhaha saxaafadda caalamka, ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ay fool-ka-fool isugu soo hor-fadhiistaan Somaliland iyo dawladda TFG, waxaana lagu wadaa inay labada dhinac soo saaraan war-murtiyeed la xidhiidha waxyaabihii shirkaas lagaga wadahadlay.
Wufuudda labada dhinac shirka uga qaybgalayay shirka ayaa markii ay gaadheen magaalada London, waxa uu dhinac kastaaba saadaaliyay waxa ay rajaynayaan inuu ka soo baxo shirkaas. “Shirkan waxaanu ka filaynaa inuu fursad siiyo Somaliland iyo dawlada ku meel gaadhka ah ee Soomaaliya inay ka wadahadlaan amuuro fara badan iyo xidhiidhka labada dal. Ka wefti Somaliland ahaan, waxaanu rajaynaynaa inay noqoto dariiq cusub oo ay Somaliland u marayso sidii ay Soomaaliya iyo beesha Caalamkaba uga heli lahayd taageero, ictiraafka qadiyada iyo madaxbanaanida Somaliland,” sidaa waxa yidhi Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Md. Maxamed Cabdillaahi Cumar. Mar wax laga waydiiyay waxay ka iibinayaan gudigga ay la kulmayaan, waxa uu ku jawaabay, “Gudidani waa gudi-qaran oo metalaya qaybihii kala duwanaa ee qaranka haddii ay baarlamaan tahay, haday xukuumada tahay iyo xisbiyada qaranka intaba, waxayna ka turjumaysaa wada-jirka sida ay xukuumada iyo qaybaha kala duwan ee dalka ay uga midaysan yihiin horumarinta qadiyada, madaxbanaanida, nabadgalyada Somaliland.”
Dhinaca kale, hogaamiyaha weftiga TFG Cabdisamed Macallin Maxamuud Sh. Xasan oo ah Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Soomaaliya oo isna dhiniciisa wax laga waydiiyay shirkaas waxay ka filayaan, waxa uu hadalkiisa ku bilaabay, “Muddo dheer oo dhawr iyo laabatan sano ah waa markii ugu horeysay oo uu shir noocan ahi furmo, waxaan rajaynayaa haddii Illaahay ka dhigo inay ka soo baxaan wax ummadda Soomaaliyeed ku farxaan meel kasta ay joogaanba. Wejiga koowaad ee shirka wixii ka soo baxa wuxuu gogal-dhig u noqon doonaa shirka labaad, kan waxaan u sii xaadhaynaa sidii ay wax u bilaami lahaayeen wadahadalka, markaa kuwa kale waxay daba raacayaan wixii ka dhasha.”
Mar la wadiiyay sababta ay dawladda TFG oo mudo koobani u hadhay ay heshiisyo u gali karto, waxa uu ku jawaabay, “Sida run ahaantiiya waxa weeye, immika maaha in wax gaar ah la samaynayo ee waxay tahay in barnaamij mudo dheer laga soo shaqaynayay ay bilaabmayso. Haddii ay dhacdo inay xukuumad kale timaado, kolley dariiqii la bilaabay mid marta oo ku sii socon doonta ayay noqonaysaa ee maaha barnaamij shakhsiyaad gaar ahi wada-galayaan, waa barnaamij ay xukuumadi galayso, markaa wixii hada bilaabmay waxay noqonaysaa inay halkaa ka sii wadaan.”
RAADI WARARKII HORE	Ugu dambeeyey/Recent Posts Madaxweynaha Somaliya oo Qaaday Jid ay ku Tanaadi-waayeen Hoggaamiyayaashii ka horeeyey iyo Ujeeddooyin laga Iftiimiyey hadallo Xanaf leh oo uu Ku soo beegay Wakhti Xasaasi ah Madaxweyne Siilaanyo oo Farriin isugu jirta CANAAN iyo BAAQ u diray Shacabka, Kana Hadlay Midhaha ka Dhashay Isbeddellada Siyaasadeed ee Arrimaha Debedda Munaasibaddii ugu Miisaanka Cusleyd oo Gobollada Dalka iyo Caalamkaba si weyn loogu Xusay 22-guuradda Qaranimada Somaliland (SAWIRRO) Madaxweynaha Somaliland oo Beesha Caalamka kula Garnaqsaday Iska-indho tirka Qadiyadda JSL iyo Sheegashada Midnimada Soomaaliya Wasiirkii Hore ee Duulista Hawada oo Iftiimiyey Aragtidiisa iyo Waayo-aragnimadiisa ku wejahan Go’aanka Xukuumaddu Ku Mamnuucday Duulimaadyada Qaramada Midoobay Madaxweyne Siilaanyo oo Kulan Ballaadhan la Qaatay Maamulka iyo Ardayda Jaamacadaha Caasimadda iyo Nuxurka Khudbad uu ka Jeediyey Madasha Kulanka Xisbiga WADDANI oo Masuuliyadda Dhacdadii Burco dusha ka saaray Wasiirka Arrimaha Gudaha, Si adagna u difaacay Guddoomiyaha UCID ADDIS ABABA: Wasiirka Ganacsiga oo ka hadhay Weftigii Madaxweyne Ku-xigeenka oo xalay u Duuley Dalka Ingiriiska Xukuumadda Somaliland oo Duulimaadyada Diyaaradaha QM ka mamnuucday Madaarradeeda, Si Adagna u cambaareysay Go’aan Lagu Maroorsaday Maamulka Hawada Sare BURCO: Maamulka Gobolka iyo Degmada oo Xaqiijiyey Badhitaan lagu wado Cidda Bixisay Amarka Ciidanka RRU-da ku Weerareen Shacabka iyo Xukuumadda oo lala Xidhiidhiyey	Qormooyinka ugu Akhris badan
Maxaad ka taqaanaa astaamaha Cudurka Qoorgooyaha iyo sida loo daweeyo ? - 32,861 viewsSomaliland: If Eritrea & South Sudan Could Gain Sovereignty, So Could Somaliland - 17,170 viewsSomaliland hopes for international recognition - 15,791 viewsGaddafi:’It’s a conspiracy to take our oil and a plan to re-colonise our country’ - 14,892 viewsHead of Uganda EC: I will announce winner within 48 hours - 11,776 viewsDalalka adduunka ugu farxadda badan iyo sida ay u kala horreeyaan - 11,552 viewsSomalia: Exposing the Hideous Face of the Puntland Regime - 11,452 viewsTel Aviv: Hostage Drama in Turkish Embassy - 11,171 viewsIGAD with the Largest Donors Delegation arrives Somaliland - 10,886 viewsSomaliland Coastguards and Ground Troops—The Real Panacea for Sea Piracy - 10,842 views